"Kuziva ndiyo kodeti" uye tsvimbo inogadziridzwa mubhuku iri re physics - New York Times - TELES RELAY
HOME » mwe "Kuziva inzira" uye tsvimbo inogadziriswa mubazi rino re physics - New York Times
X enamel2 Reddit0 StumbleUpon0
Munguva yemashoko ake okuzarura, Dr. Reis ainge aine shungu dzekutambudza nechemberi yakagadziriswa. "Uyu muenzaniso wakanaka wekuti nei tichida chaizvo izvi," akadaro.
Dr. Reis ari kutambura kurema mazamu kukwira michina, mabhasiki, sutures ekuvhiya uye nzira yokuendesa kumabhobhoti unyanzvi hwokushanda ruzivo rwokuvhiya. Munguva yechipurogiramu, vashandi varo laboratory vakatsanangura kuti vakashandisa sei scanner kuti vaongorore ruzivo rwomukati rwemajinga filaments uye kupesana kunoitika apo ma fila fila anobatana. Mushure memusangano, Dr. Matsumoto akamutumira kumusha nemamwe masayeri ake.
Derek Moulton weOxford Yunivhesiti akataura nezvezvimwe zvezvikepe zvegungwa, DNA uye mapuroteni, pamwe nehonye dzinosungira mafundo kuti zvideredze kupera simba. Akaenderera mberi achitsanangura "kana fukisi yakabatanidzwa zero nharo yekuzvibatanidza rinogona kuitwa mumuviri ". Mune mamwe mazwi, pane node inowanikwa umo pane imwe yaro inopindirana inobatanirana? (1965)
Uye Thomas Plumb-Reyes, nyanzvi yefizinesi yakashandiswa paHarvard, akabudisa tsvakurudzo yake pamusoro pe " Detangling Hair Kumira kune vanhu chete.
"Chii chiri kuitika mune bvudzi rakanyungudutswa?" Akabvunza. "Ndeipi iyo yakanakisisa yekugadzirisa nzira?"
Shashank Markande, mudzidzi weP.D. anoshanda naDkt. Matsumoto, akataura pamusoro pekutsanangurira basa rake kusvika ikozvino. Vose pamwe chete, vainge vaita kuti vafungidzire: zvese zvakasikwa zvinofanira kuva ribbon knots. (Uta hwebhandi iyo inopindira chaizvo.) Uye ivo vakafunga pamusoro pekodollary: Izvo zvose zviso zvebhandi zvinogadzirwa here?
MunaFebruary, Markande (uyo akatanga kutora nguva pfupi nekuda kwesayenzi) akafunga kuti akanga awana muenzaniso weusina-callable ribbon node, uchishandisa software inonzi Node uye Links inonzi SnapPy. Akatumira mharidzo kuna Dr. Matsumoto nemutsananguro: "Ndiudze kana zvinogona kubatwa?"
. Matsumoto akanga ava kuda kumhanyira, uye panguva yaakazodzoka, mushure mokunge achitungamirira tambo kumativi ose, akanga awana mhinduro. "Ndinofunga kuti inogona kubatwa," akapindura kudaro. Apo Mr. Markande akasimbisa nyaya yacho, akawedzera kuti: "Izvi zvinopesana nemitemo yedu, asi hazvisi zvishoma kuita zvigunwe."
Murume akatongerwa makore matatu kuti adzivirire zvinonyadzisira paIndaneti yakadzika